हिमालयन बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस बैङ्कको वित्तीय विवरण सहितको आर्थिक अवस्था | गृहपृष्ठ
Home लगानी हिमालयन बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस बैङ्कको वित्तीय विवरण सहितको आर्थिक अवस्था
हिमालयन बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस बैङ्कको वित्तीय विवरण सहितको आर्थिक अवस्था
हिमालयन बैङ्क लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको आव २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. ४१ करोड १ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो बर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रू. ४३ करोड ८४ लाख नाफा कमाएको थियो । सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको हो । बैङ्कको चुक्तापूँजी ३० प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ४९ करोड र रिजर्भ कोषको रकम १८ प्रतिशतले बढेर रू. ५ अर्ब ६८ करोड पुर्याएको छ । लगानी रू. १७ अर्ब ८४ करोडभन्दा बढी रहेको छ । बैङ्कले बैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. ९ अर्ब १४ करोड आम्दानी गरेको छ । साथै बैङ्कले लगानीकर्ताहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ३१५८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव बैङ्कको कात्तिक १४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
वर्गिकरण : बाणिज्य बैङ्क
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू.८४०
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्य : रू. १७१४
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्य : रू.७०५
१८० दिनको औसत व्यापार मूल्य : रू.८९३.६५
कम्पनीका महत्वपूर्ण अनुपात:-
सञ्चालक समिति :-
अध्यक्ष : मनोज बी श्रेष्ठ
कार्यकारी अधिकृत : अशोक शमशेर जे.बी राणा
प्रधान कार्यालय : कमलादी काठमाडौं
वेबसाइट : www.himalayanbank.com
शाखा : ४७
स्टक सङ्केत : एचबिएल
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ८ दशमलव ८३ प्रतिशतबाट घटेर ६ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । बैङ्ले पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा रू.९६ अर्ब १३ करोड निक्षेप संकलन गरी रू. ८० अर्ब ७८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. ७७ करोड ५४ लाख, कर्मचारी खर्च रू. २५ करोड ७९ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. २० करोड ४३ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ४४ करोड ५३ लाख रहेको छ ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति १२ प्रतिशतले बढेर रू.२ अर्ब १७ करोड ७० लाख र अन्य सम्पत्ति ८ दशमलव २३ प्रतिशतले बढेर रू.२ अर्ब ५३ करोड ३३ लाख पुगेको छ ।
बैङ्कले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. २० करोड ३४ लाख छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । सोही अवधिमा रू. १९ करोड ८८ लाख खराब कर्जा उठाउन बैङ्क व्यवस्थापन सफल भएको छ ।
पूँजीकोष लागत ६ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीकोष प्रर्याप्तता ११ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ ।
बैङ्कको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रति शेयर आम्दानी रू.२५ दशमलव २७, मूल्य आम्दानी अनुपात (पिइ रेसियो) ३५ दशमलव ३५, तरलता अनुपात २० दशमलव ६९ र प्रति शेयर नेटवर्थ रू. १ सय ८७ दशमलव ६० रहेको छ । बुधवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे ४ गुणा छ ।
कम्पनीको प्राविधिक विश्लेषण :-
बुधवार भएको शेयर कारोबारको विवरण :-
९ अगष्ट २०१७ ७ नोभेम्बर २०१७
मैनबत्ती विश्लेषण : बैङ्ककोे ५३ दिनको कारोबारको अन्तिम दिनमा ह्याम्मर आकृती बनेको छ । यस आकृतीले आगामी दिनमा शेयर मूल्य बुलिशमा जाने सङ्केत देखाउँछ । यसको विश्वसनियता सामान्य रहेको छ ।
आरएसआई : बैङ्कको ५३ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (३८ दशमलव ९७ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन : कम्पनीको ५३ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन ९ दशमलव ४५ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : बैङ्कको ५३ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्य रेखाभन्दा तल छ । हालको मूल्य रू. ८ सय ४० देखि बजार अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ८ सय ५० मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. ८ सय २० मा टेवा पाउन सक्छ ।